3 ထပ်အဆောက်အအုံဥမင်တည်ဆောက်ရန်လိုအပ်လျှင် Marmaray နှင့်3.Köprüအဘယ်ကြောင့်တည်ဆောက်ရသည် | RayHaber | raillynews
ပင်မစာမျက်နှာတူရကီMarmara ဒေသကြီး34 အစ္စတန်ဘူလ်အဆိုပါ Marmaray Tube ဥမင်လိုဏ်ခေါင်းကြမ်းပြင်3အကယ်. များနှင့်အရာ Done အဘယ်ကြောင့်xnumx.köpr
အဆိုပါ Marmaray Tube ဥမင်လိုဏ်ခေါင်းကြမ်းပြင်3အကယ်. များနှင့်အရာ Done အဘယ်ကြောင့်xnumx.köpr
01 / 03 / 2015 34 အစ္စတန်ဘူလ်, အထွေထွေ, ခေါင်းစီးသတင်း, တူရကီ
Marmaray ၏ဖြစ်ရပ်မှန်အတွက်3Storey ဥမင်လိုဏ်ခေါင်းများနှင့်အဘယ်ကြောင့်ဖျြောxnumx.köpr: စီးတီးကြိုတင်စီစဉ်သူများအစ္စတန်ဘူလ်ဌာနခွဲကသမ္မတ Tayfun Kahraman ၏ကုန်သည်ကြီးများအသင်းဝန်ကြီးချုပ် Ahmet Davutoglu အထွေထွေရွေးကောက်ပွဲတစ်ရပ် electioneering ကနေဖန်ဆင်းတော်သောဖြေရှင်း "electioneering အဖြစ်တန်ဖိုးထားတဲ့"3ထပ်တိုက်ဂရိတ်အစ္စတန်ဘူလ်ဥမင်လိုဏ်ခေါင်း "ထုတ်ပြန်ကြေညာ ။ ကျနော်တို့အရင်ရွေးကောက်ပွဲတွေအတွက်မြင်ကြပြီထိုသို့သောဂတိတော်များ, "ဟု၎င်းကပြောသည်။ ဒါကြောင့်ဥမင်လိုဏ်ခေါင်းသူရဲကောင်းများနှစ်ဘက်အကြားဆိုတဲ့မေးခွန်းကိုအမှတ်, "အပြန်အလှန်သယ်ယူပို့ဆောင်ရေးသယ်ဆောင်ကြောင်းညွှန်ပြ, အစ္စတန်ဘူလ်ရဲ့အသွားအလာမှအဖြေတစ်ခုကိုဖြစ်ပေါ်စေပါလိမ့်မည်ရှိမရှိ, အစ္စတန်ဘူလ်ဟာအသွားအလာကိုသာ3ရာခိုင်နှုန်းခန့်ပါဝင်သည်။ ဥမင်လိုဏ်ခေါင်းကျန်ရှိနေသေးသော5ရာခိုင်နှုန်းအဖြေတစ်ခုထုတ်လုပ်ရန်လိမ့်မယ် "ဟုသူကပြောသည်။
ပြွန်ကို လုပ်.3လျှင်။ တံတား, MARMARAY ဘာကြောင့်လဲကျင်းပခဲ့သည်
အစ္စတန်ဘူလ် 1 / 100.000 အတွက်ကျင်းပမည့်အဆိုပါစီမံကိန်းများကို3", ထိုအစီအစဉ်သူရဲကောင်းနှင့်အညီလုပ်ဆောင်သင့်ပါတယ်အဘယျသို့မှုကိုအလေးအနက်, ပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်းရေးအဖွဲ့ခဲ့သည်ဆို၏။ တံတားကဒီအစီအစဉ်တွင်မပါဝင်တာဖြစ်ပါတယ်အပါအဝင်အတော်များများစီမံကိန်းများကို။3။ တံတားများပြုသောအမှုဖြစ်ပါတယ်။ ထိုအခါအဘယ်ကြောင့်ထိုကဲ့သို့သောစီမံကိနျးအတှကျလိုအပျရှိသလော ဤသည်ဥမင်လိုဏ်ခေါင်းထို့နောက်အဘယျကွောငျ့ Marmaray သည် Eurasian လမ်းမကြီး Tube Crossing စီမံကိနျး၏အုတ်မြစ်ချကြပြီ, ရော်ဘာ-tyred မော်တော်ယာဉ်များအသုံးပြုရန်အတွက်ဟုဆိုသည်။ အခြားရွေးချယ်စရာတန်ဖိုးအဖြစ်သမိုင်းဝင်ကျွန်းဆွယ်ဖျက်သိမ်းရေးပြီးနောက်ပေါ်ထွက်လာဘာဖြစ်လို့ဒီအဖြစ်သနည်း "ဟု၎င်းကပြောသည်။
အစ္စတန်ဘူလ်တည်ဆဲ TRAFFIC ကိုအားကိုးမရဖြေရှင်း
တူညီသောအစိုးရ Landscaping နေဖြင့်အစ္စတန်ဘူလ်အတွက်ဗိသုကာသဘာဝပတ်ဝန်းကျင်သက်ရောက်မှုအကဲဖြတ်အကြံပေးကော်မတီအတွင်းရေးမှူးMücella၏ကုန်သည်ကြီးများအသင်းအပြုသဘောဆောင်တဲ့သည့် Plan ကိုကျနော်တို့ xnumx.havalim Thani ၏xnumx.köprစကားကိုနားထောငျ "တိုင်းရွေးကောက်ပွဲကိုသံသရာ, တူးမြောင်းအစ္စတန်ဘူလ်, ထိုကဲ့သို့သော Eurasian ဥမင်လိုဏ်ခေါင်းအဖြစ်အကြီးစားစီမံကိန်းများ၏အဘယ်သူမျှပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်းရေးအစီအစဉ်ထဲမှာမကြောင်းကိုဤသို့ပွ "သူကပြောသည်။
အဆိုပါဥမင်လိုဏ်ခေါင်းအစ္စတန်ဘူလ်အတွက် Bosphorus ၏နှစ်ဖက်ချိတ်ဆက်ပါလိမ့်မယ်သူတို့ "အပြုသဘောနဲ့2တည်ဆဲအသွားအလာပြဿနာများကိုဖြေရှင်းနိုင်လိမ့်မည်ဟုဆိုသည်။ တံတားများ, xnumx.köpr, Marmaray သည်ဥရောပအာရှဥမင်လိုဏ်ခေါင်း ... ထိုသူအပေါင်းတို့သည်အစ္စတန်ဘူလ်၏အသွားအလာပြဿနာများကိုဖြေရှင်းနိုင်မှယူဆောင်ခဲ့သည်။ သို့သော်တစ်ဦးချင်းစီစီမံကိန်းသည်ဧရိယာ looting မိမိတို့ကိုယ်ပိုင်ဖန်တီးထားပါတယ် "ဟု၎င်းကဆိုသည်။ အပြုသဘောဆောင်တဲ့တစ်အဝေးပြေးလမ်းမကြီးဥမင်လိုဏ်ခေါင်း၏ကျမ်းပိုဒ် "ဤဥမင်လိုဏ်ခေါင်းတစ်ခုအဝေးပြေးလမ်းမကြီးဥမင်လိုဏ်ခေါင်းကြောင်းမှုကိုအလေးအနက်။ Metro ကတရားဝင်ရန်ဖြစ်ပါသည်။ အဆိုပါတံတားလည်ချောင်း၏ပုံစံအတွက်ရွှေကိုဖန်ဆင်းပေးမထားပါ။ ယာဉ်အသွားအလာဖြတ်သန်းအဖြစ်ဒါကသူတို့ဥမင်လိုဏ်ခေါင်းမျက်နှာပြင်ပိတ်ပြီးရှိရာအချက်အသစ်အဖှံ့ဖွိုးတိုးတနေရာများတွင်၏ဝင်ရိုးဖြစ်ပါသည်, လက်ရှိအသွားအလာဖြေရှင်းနိုင်ပါလိမ့်မယ်။ အဆိုပါယာဉ်ကြောဖြေရှင်းဖို့အဝေးမှလုပ်ဖို့အစ္စတန်ဘူလ်ရဲ့ဘာမျှမှပိတ်ပါ။ "
ဝန်ကြီးချုပ် Davutoglu သုံးထပ်တိုက်ဥမင်လိုဏ်ခေါင်းစီမံကိန်းအား (ဗီဒီယို) ၏ကျြအောထုတ်ပြန်ကြေညာ
3 ထပ်တိုက်ဥမင်လိုဏ်ခေါင်းမှအစ္စတန်ဘူလ် (ဗီဒီယို)
ထို့နောက်2Marmaray ။ ပြွန်ကျမ်းပိုဒ်, နောက်ဆုံးတော့3။ တံတားများဖွင့်လှစ်ပါလိမ့်မည်
BC1 သဘောတူညီချက် (Bosphorus Tube ဥမင်လိုဏ်ခေါင်း Crossing သဘောတူညီချက်)
အဆိုပါရေနံတွင်းတူးလုပ်ငန်းစဉ်များတွင်ဥရောပအာရှဥမင်လိုဏ်ခေါင်းစီမံကိန်း '' ကစတင်ခဲ့သည်
Bedrettin ရပ်ကွက် havaray နှင့်ဥမင်လိုဏ်ခေါင်းဆောက်လုပ်ရေးဖြိုဖျက်ခံရဖို့ 560 နှစ်ပေါင်း
Kızılay-Çayyolu2မက်ထရိုÜmitköy-Çayyolu 1 ဘူတာ Km:9+ 465-10 + 380 …
ေူပာင်းလဲရေးစီမံကိန်း၏သုံးဆဥမင်လိုဏ်ခေါင်း EIA ကို Process ကိုစတင်လိုက်တဲ့
ဆွစ်ဇာလန်စာနယ်ဇင်း3ပုံပြင်ဥမင်လိုဏ်ခေါင်းစီမံကိန်းအားလေးစား
ထပ်ဥမင်လိုဏ်ခေါင်းစီမံကိန်း EIA ကိုမလိုအပ်ပါသည်3န်ကြီးဌာနဆုံးဖြတ်ပါမှ
ဂရိတ်ပုံပြင်3အစ္စတန်ဘူလ်ဥမင်လိုဏ်ခေါင်း
3 Storey ဥမင်လိုဏ်ခေါင်း
3 ။ လေဆိပ်
Eurasian လမ်းမကြီး Tube Crossing စီမံကိန်း
အဆိုပါထရပ်ကားများတွင် Adana အဆင့် Crossing ခရီးသည်တင်ရထား, များပြား3(ဗီဒီယို) ဦးဒဏ်ရာရရှိခဲ့သည်
စက်လှေကားမတော်တဆမှုသည် Periodic စစ်ဆေးမှုများပြုမိခဲ့ကြမည်မဟုတ်